मिति २०७५ असोज २० गते
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता इत्यादि सहित अन्य सुविधा वा भत्ता दोहोरो अर्थात एकभन्दा बढी लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई हामीले सही नै ठान्दछौँ । तर विदेशबाट कुनै पेन्सन वा सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले पनि उपरोक्त सुविधा र भत्ता नपाउने कुरा सही हुँदैन । नेपाल राज्यकोतर्फबाट उनीहरूले त्यस प्रकारको सुविधा वा भत्ता पाउनु पर्दछ ।
मिति २०७५ असोज १६ गते
बारा अदालतले एउटी सात वर्षिया बालिकाको बलात्कार र हत्याको मुद्दामा दर्ता भएकोदिनमै फास्ट ट्रयाकद्वारा सुनवाई गरी फैसला गरेको कार्य वास्तवमा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य थियो र त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौं । त्यसरी नै काठमाण्डौं अदालतले पनि पहलकदमी गरेको कुरा थाहा भएको छ । हामीले आशा गर्दछौं, देशभरि नै महिलामाथि हुने बलात्कार र हिंसाका मुद्दाहरुमा त्यही प्रकारले
मिति २०७५ असोज ९ गते
हालै सार्वजनिक यातायातको भाडामा १० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित भएको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला सार्वजनिक यातायातमा अहिले गरिएको भाडा बृद्धिले सरकारको सम्झौतापरस्ता नीतिलाई प्रष्ट पारेको छ । दशैं तिहार जस्तो चाडबाडको बेला यात्रुहरूलाई गम्भीर असर पर्ने गरी गरिएको भाडा बृद्धिलाई तुरुन्त फिर्ता लिन राष्ट्रिय जनमोर्चा माग गर्दछ ।
मिति २०७५ भाद्र २६
हालै रोल्पामा नेपाली का“ग्रेसका गुण्डाहरूले हाम्रो पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष का. मेघनाथ विष्टलाई कुटपिट गरेका छन् र त्यसबाट उहा“को नाक र आ“खामा समेत गम्भीर चोट लागेको छ । त्यस प्रकारको कुटपिटको कारणले उहा“ले कैयौं दिनसम्म बुटवलको मेडिटेक अस्पतालमा उपचार समेत गराउनु परेको थियो । उहा“माथि भएको त्यस प्रकारको कुटपिटको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा भ्रत्सना गर्दछ ।
मिति २०७५ भदौ १२ गते
देशमा बढिरहेको करवृद्धिप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीव्र असन्तोष र विरोध प्रकट गर्दछ । अहिले भइरहेको करवृद्धि संघीयताको नै परिणाम हो । संघीयताको सन्दर्भमा प्रादेशिक संरचनाको बढेको खर्चले गर्दाखेरी नै सरकारले कर बढाउँदै लगेको छ । त्यसकारण संघीयतालाई खारेज गरेर नै अहिलेको बढेको करलाई कम गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ मत छ । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि संघीयतालाई खारेज
१. यही भाद्र १ गतेदेखि नया“ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागु भएको छ । वि.सं. १९१० सालमा पहिलो मुलुकी ऐन बनेको थियो । त्यस ऐनलाई व्यापक परिमार्जन सहित २०२० सालमा मुलुकी ऐन बनेको थियो । बेला बेलामा संशोधन हु“दै यो ऐन ५५ वर्षसम्म लागु भयो । यस बीचमा नेपालमा दुई पटक राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरु भए । विश्वस्तर र नेपालमा पनि न्यायको क्षेत्रमा कैयन नया“ मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु स्थापित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । नया“ संविधान र बदलिएको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तनले ती कुराहरुलाई समेत संवोधन गरेर नया“ र प्रगतिशील प्रकारको मुलुकी ऐन अपरिहार्य आवश्यकता थियो ।